Dhibaato weyn oo la taaban karo fahmaan binary anshaxa cilmi baarista waa in ay polarizes dood. Wicitaanka sadhaysan Qiirada ama dhadhamiya, Xiriirka, iyo buro Time ceelka Jeexdin iyo waxbarashada, kuwaas oo si wadajir ah ula xasuuqii run in hab in ay waxba ma tarto. U soo guurista ka fikirka binary iyo af qaybinta iska ma aha call a for na si ay u isticmaalaan luuqad u qasan si ay u qariyaan dabeecad xumo. Saas ma aha, fikrad oo joogto ah anshaxa doonaa, Waxaan qabaa, waxay keeni in luqadda more taxadir iyo sax ah. Dheeraad ah, fikrad oo joogto ah anshaxa cilmi caddaynaya in qof kasta xitaa cilmi sameynaya shaqada in mar horeba la tixgeliyo "anshaxa" ku dadaalaan si ay u abuuraan -should ah, xataa si fiican anshaxa dheelitirka in ay shaqada.
lacagta A final of dhaqaaqo xagga fikirka joogtada ah waa in ay dhiiri-hoosaysiinta caqliga, taas oo ku haboon in wajiga of caqabadaha anshaxa adag. The su'aalo anshaxa cilmi baarista ee da'da digital ay adag tahay, oo qof hal lahayn waa in ay si kalsooni iyada oo awood gaar ah loo ogaado koorsada saxda ah talaabo.